Tilmaamaha 9-Tallaabada ah ee Loogu Sameynayo Blog lagu Kordhinayo Raadinta | Martech Zone
Tilmaamaha 9-Tallaabo ah ee Abuurista Blog lagu Kordhiyey Raadinta
Sabtida, Diisambar 13, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Inkastoo aan qornay Blogging Corporate For Dummies qiyaastii 5 sano ka hor, wax aad u yar ayaa is beddelay istiraatiijiyadda guud ee suuqgeynta maaddada iyada oo loo marayo bartaada shirkadda.
Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, marka aad qorto wax ka badan 24 qoraallo blog, jiilka taraafikada ayaa kordha ilaa 30%!
Infograafigani ka yimid Abuur Buundada wuxuu ku dhex socdaa xoogaa tabo fiican oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo bartaada barta. La iima iibin inay tahay hagaha ugu dambeeya… laakiin way fiicantahay.
Aasaaska ay seegi waayaan bilowgu waa inay hubiyaan inaad wax ku qoreyso a nidaamka maareynta maaddada ee lagu hagaajiyay raadinta matoorada. Ku qoridda waxyaabaha ku jira barxadda heerka hoose waa waqti lumis waxayna noqonaysaa dhibaato iyadoo aan loo eegin sida wanaagsan ee aad wax u qortid.
Taladooda aasaasiga ah ee ku saabsan infographic waa qor maadooyin tayo leh oo si fiican u qor. Kaliya taasi kuma helaysid inaad ka hesho natiijooyinka mashiinka raadinta, in kastoo. Waa inaad dhisatid maamulka waqti kadib waxyaabaha aad ubaahantahayna inay ka fiicnaadaan waxa wanaagsan - waxay ubaahantahay inay ahaato mid cajiib ah. Waa la yaaba waxyaabaha la wadaago - iyo waxyaabaha la wadaago ayaa la kala saaraa! Waxaa jira waxyaabo badan oo wanaagsan oo halkaa ka jira oo si fiican u qoran oo aan laga heli karin natiijooyinka raadinta!
Infographic wuxuu kaloo sheegayaa inaad ugu yaraan laheyd 2,000 erey halkii boostada. Waan ku raacsanahay si qalbi furan, lambarkani maahan sharci waana tusaale weyn oo ku saabsan isku xirnaanta sababaha. Tirada ereyada ku jira boostadaada waligood ku siin maayaan darajo. Inta badan qoraalladeennu waxay sifiican uga hooseeyaan ereyada 2,000 waxaanan kuqaddarinnaa shuruudaha tartanka.
Waxaan aaminsanahay in dadka cilmi baaris badan iyo qorsheyn badan galiyay boosteejo dhameystiran taasi ay tahay cajiib ah waxaa laga yaabaa inay fursad fiican u leedahay in waxyaabahaas la wadaago oo la kala dhigo. Dhererka maahan darawal darajeynta halkaas, waa tayada waxyaabaha ku jira. Waxaan doorbidi lahaa qoraallo gaagaaban marar badan - ma doonaysid inaad ku nuujiso meesha aad wax ugu qori karto si kooban.
Talada soo hartay waa mid adag - qaabeyn, xawaare, jawaab celin, adeegsiga warbaahinta, astaamaha cinwaanka, cinwaannada emailka, dhiirrigelinta bulshada… dhammaan talooyinka adag. Wixii ku saabsan qaladaad qaldan iyo naxwaha naxwaha - mahadsanidin akhristeyaashayda halkaas ayey igu cafiyaan. Hadana haddii qoraaga infographic-ka uu si dhow u eegay, waxay ka heli lahaayeen higgaadin mid ka mid ah cinwaannadooda!
Ugu dambeyntii, guusha bartaada waxay kuxirantahay kaliya hal shay: Haddii aad siinaysid qiimo dhagaystayaashaada iyo in kale. Haddii aad tahay, waxaad arki doontaa bartaada internetka inay koraan oo ay ubaxdo ilaha suuq geynta weyn ee shirkaddaada - gaar ahaan mashiinnada raadinta. Haddii aadan bixinaynin qiimaha, waad guuldareysan doontaa. Qaabka qaldan ama saxda ah ee loo qoro baloog waxay ku xiran tahay dhagaystayaashaada, maahan tan sawir-gacmeedka!
Tags: khaladaad naxwaha bloghiggaado bloghagaajinta blogblogging ganacsigahubinta ganacsigaflannery chantelleContent Suuqblog shirkadeedblogging shirkadahablogging shirkado loogu talagalay dummiesabuuri buundadadouglas karrinfographicayna search enginedhiirrigelinta warbaahinta bulshadaereyada boostada
14, 2014 at 1: 17 AM
Qoraal weyn waan jeclahay qoraalkan.
30, 2014 at 10: 06 AM
Qoraal weyn oo leh sawirro wanaagsan. Anigu garan maayo meesha aad ka heshay, laakiin iyagu si qumman ayey ugu habboon yihiin! Shaqo wacan